तीन करोड जनतालाई १४ सय डाक्टर ! – Nepali Health
२०७५ फागुन २८ गते ८:११ मा प्रकाशित
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माका अनुसार हालसम्म नेपालमा २३ हजार ५ सय चिकित्सक उत्पादन भएका छन् । तर, तीमध्ये थुप्रैको मृत्यु भइसकेको छ भने धेरैजसो रोजगारीका लागि विदेशमा छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकको संख्या करिब ३ हजार छ । सरकारी र निजी तवरमा कार्यरत चिकित्सकको संख्या जम्मा ४ हजार ४ सय छ ।
श्रेष्ठले दुवै क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा चिकित्सक अभाव रहेको बताए । ‘उत्पादनको अनुपातलाई आधार मान्दा चिकित्सक अभाव छैन,’ उनले भने, ‘तर धेरैजसो बिदेसिएका कारण सानो संख्या मात्रै सेवामा छन् । यसले गर्दा चिकित्सक र जनसंख्याको ग्याप फराकिलो हुन पुगेको छ ।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार चिकित्सकले एकजना बिरामीलाई कम्तीमा २० देखि ३० मिनेटको समय दिनुपर्ने हुन्छ । तर, उपत्यकाभित्र काम गर्ने चिकित्सकले दैनिक १ सय ५० जनासम्म बिरामी हेर्दै आएका छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल, आचारसंहिता समितिका संयोजक तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा। ढुण्डीराज पौडेल बिरामीलाई चिकित्सकले कति समय दिने भन्ने कुरा रोगको प्रकृतिमा निर्भर हुने बताउँछन् ।
‘बिरामीलाई समयभन्दा पनि सन्तुष्ट पार्नेकाम चिकित्सकले गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकले ८ घन्टा बिरामी हेर्दा नेपालमा बिरामीले ५ मिनेट समय पाउन पनि कठिन छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ – ‘एक हजार जनसंख्याबराबर कम्तीमा एक डाक्टर हुनुपर्छ’
तर, नेपालमा १४ सय सरकारीसहित जम्मा ४४ सय डाक्टर कार्यरत छन् अर्थात् एक डाक्टरको भरमा ६७५० जनता पर्छन्
नेपाल मेडिकल काउन्सिल भन्छ, ‘एक डाक्टरले एक बिरामीलाई २० मिनेट दिनुपर्छ’ तर बिरामीले औसतमा पाँच मिनेट पाउँछन्
सहरमा ६२.९५ प्रतिशत र गाउँमा ३७.०५ प्रतिशत बासिन्दा छन्, तर डाक्टर सहरमा ८० प्रतिशत र गाउँमा २० प्रतिशत मात्र छन्
पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती भन्छन्, ‘२५ वर्षमा जम्मा दुई सय डाक्टरको दरबन्दी थप’
डाक्टरको दरबन्दीको विषयमा पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती भन्छन्, ‘८ वैशाख २०५१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको संगठन संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेको थियो । त्यसवेला चिकित्सकको दरबन्दी थप गरिएको थियो । त्यसयता ठूलो संख्यामा चिकित्सकको दरबन्दी थपिएकै छैन । दुई वर्षअघि नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनका कारण २ सयको संख्यामा चिकित्सकको दरबन्दी थप गरिएको थियो । त्यसयता थप्ने चर्चासमेत गरिएको छैन ।’
हाल देशभर १ हजार ६ सय ५० चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर, सरकारी सेवामा अहिले १ हजार ४ सय मात्रै खटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या ५ सय छ । झन्डै ९ सयको संख्यामा मेडिकल अधिकृत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारलाई आठौँ तहदेखि १२औँ तहसम्मका चिकित्सकको बढी आवश्यकता छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवका अनुसार २५ वर्षदेखि स्वास्थ्यमा दरबन्दी नथपिएका कारण सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या उब्जिएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले तयार पारेको समाचार
अष्ट्रेलियामा नर्सिङ पढ्न गएका विद्यार्थी बिचल्ली के कारणले ? छानवीन प्रतिवेदनमा यस्तो छ